iPhone 13 စီးရီး
iPhone 12 စီးရီး
iPhone 11 စီးရီး
Galaxy S21 စီးရီး
Galaxy Note 20 စီးရီး
Mi 10 စီးရီး
Mi 11 စီးရီး
Mate 40 စီးရီး
3D Resin အစွန်း
Samsung ultrasonic လက်ဗွေသော့ဖွင့်ခြင်း၏ စခရင်အကာအကွယ်ပြဿနာကို မည်သို့ဖြေရှင်းမည်နည်း။
Samsung ultrasonic လက်ဗွေသော့ဖွင့်ခြင်း၏ စခရင်အကာအကွယ်ပြဿနာကို မည်သို့ဖြေရှင်းမည်နည်း။ မူအရ၊ ultrasonic လက်ဗွေအသိအမှတ်ပြုနည်းပညာသည် လက်ချောင်း၏မျက်နှာပြင်ဆီသို့ အာရုံခံကိရိယာများမှတစ်ဆင့် ပို့လွှတ်ပြီး ပဲ့တင်သံများကို လက်ခံရရှိသည့် ultrasonic လှိုင်းများကို အခြေခံထားသည်။ သိပ်သည်းဆ...
Lab Test 1- Tempered glass screen protector ၏ ပြုတ်ကျသော ဘောလုံးစမ်းသပ်မှု
စျေးကွက်ရှိ မှန်စခရင်အကာအကွယ်များ၏ စျေးနှုန်းသည် အလွန်ရှုပ်ထွေးသော်လည်း ဝယ်သူသည် glass screen guard ကိုဝယ်ယူရန် ရွေးချယ်သောအခါတွင် စခရင်အကာအကွယ်များ၏ အရည်အသွေးကို မျက်လုံးဖြင့် အကဲဖြတ်ရန် နည်းလမ်းမရှိပါ။ ထုတ်လုပ်နေစဉ်အတွင်း စက်ရုံသည် မှန်စခရင်အကာအရံများ၏ အရည်အသွေးကို မည်သို့ထိန်းချုပ်သနည်း...
Samsung S22 သည် tempered glass screen protector အသေးစိတ်များကို တန်းစီပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သိသည့်အတိုင်း Samsung S22 စီးရီးစမတ်ဖုန်းကို ဇန်န၀ါရီလ 2022 တွင် စတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူများအား ပထမဆုံးဈေးကွက်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ရန်ကူညီရန်အတွက် Samsung ကဲ့သို့ အရွယ်အစား3ခု (6.2″/6.7″/6.8″) အတွက် tempered glass ကို တီထွင်ခဲ့သည်။ S21 စီးရီးအရွယ်အစား။ မူရင်း gl အရ တီထွင်ထားတာပါ..။
(၁) ကိရိယာထောက်လှမ်းခြင်းမရှိဘဲ သင်ဝယ်သော tempered glass screen protector ၏ အရည်အသွေးကို မည်သို့စစ်ဆေးရမည်နည်း။
ကိရိယာထောက်လှမ်းခြင်းမရှိဘဲ သင်ဝယ်သော tempered glass screen protector ကို ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲ။ လူနှင့်ဖောက်သည်အများစုသည် မတူညီသောပေးသွင်းသူများထံမှ tempered glass စခရင်အကာအကွယ်များကြား ခြားနားချက်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြဘဲ၊ ထုတ်ကုန်များသည် တူညီသင့်သည်ဟု ယူဆကြသည်။ တကယ်တော့ pr...
ပရီမီယံအမှတ်တံဆိပ် tempered glass က ဘာကြောင့် ရောင်းကောင်းပြီး စျေးသက်သာတဲ့ tempered glass တွေ မသုံးဖြစ်တော့တာလဲ။
ပရီမီယံအမှတ်တံဆိပ် tempered glass က ဘာကြောင့် ရောင်းကောင်းပြီး စျေးသက်သာတဲ့ tempered glass တွေ မသုံးဖြစ်တော့တာလဲ။ "ဆိုးလိုက်တာ၊ ငါတို့ ယူရို 0.4 ကို ဝယ်နိုင်တယ်၊ လက်လီရောင်းချသူတွေက ယူရို 1.0" နဲ့ ရောင်းနိုင်တယ် "" Tempered glass screen protector တွေကို အပတ်တိုင်း 25,000 ယူနစ်နဲ့ ဝယ်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေတုန်းက ငါတို့က ပြောင်းလဲခဲ့တယ်...
OTAO Amazon ဖောက်သည်အမေးနှင့်အဖြေများ
OTAO Amazon Customer Questions & Answers လေးစားအပ်ပါသော ဖောက်သည်များ၊ သင့်ကိုယ်ပိုင်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများအတွက် စခရင်ထုတ်ကုန်များအကြောင်း မေးစရာများရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ amazon စတိုးမှ သင်ဝယ်ယူပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်လိုပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ amazon သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့- otaostore@outlook သို့ ဆက်သွယ်ပါ။ com သန်း...
OTAO Samsung S22 tempered glass screen protector ထွက်ရှိခြင်း။
OTAO Samsung S22 tempered glass screen protector ဖြန့်ချိမည့် Galaxy S ထုတ်ကုန်များ၏ မျိုးဆက်သစ် ထွက်ရှိမည့်ရက်ကို အတည်မပြုနိုင်သေးသော်လည်း ဇန်န၀ါရီ 2022 တွင် ဖြန့်ချိရန် ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် Galaxy S21 စီးရီးကို မိတ်ဆက်ပြီး တစ်နှစ်ကျော်ကြာအောင် ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဲ့ကြားက ပုံမှန်ကွာဟချက်က...
Apple ၏ 14th၊ စက်တင်ဘာ 2021 ဖြစ်ရပ်။ iPhone 13 ဖြန့်ချိခြင်း။
ပျမ်းမျှနှစ်တွင် Apple သည် iPhone နှင့် Apple Watch တို့ကို အဓိကထားလုပ်ဆောင်သည့် စက်တင်ဘာလတွင် ပွဲကျင်းပသည်။ iPhone 13 Apple Watch Series7Air Pods3OTAO သည် ထိုစက်ပစ္စည်းများအတွက် စခရင်အကာအကွယ်ကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီး၊ ဖြန့်ဖြူးသူအများစုသည် ရုပ်သံလိုင်းနှင့် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ရန်အတွက် ထုတ်ကုန်များကို မှာယူထားကြသည်။ ဝဲလ်...
Apple ၏ iPhone 13 tempered glass screen protector ကို ဧပြီလတွင် စတင်ရောင်းချခဲ့သည်။
21-04-23 ရက်နေ့တွင် admin မှ
iPhone 13 သည် ၎င်း၏ထွက်ရှိရန် လပိုင်းသာ လိုတော့ပြီး 2021 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် မျှော်မှန်းထားသော်လည်း၊ စခရင်အကာအကွယ်၏ ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူအနေဖြင့် OTAO သည် ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် မိုဘိုင်းဖုန်းစခရင်များ၏ ဒေတာကို ရယူရန်နှင့် tempered glass ကို စတင်ထုတ်လုပ်ရန် အမြဲကြိုးစားနေပါသည်။ .
Screen Protector က သင့်အတွက် အကျိုးရှိစေမှာပါ!!!
21-03-13 ရက်နေ့တွင် admin မှ
မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း ပြုတ်ကျရင် စခရင် ခြစ်မိရင် ဘယ်လိုခံစားရလဲ?? ဒါဆို မင်းဘာလုပ်မှာလဲ။ 1. မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးဝယ်ဖို့ USD800-1000 အကုန်အကျခံပြီး သုံးစွဲဖို့ စိတ်ကူးရှိပါသလား။ အထူးအားဖြင့် မူရင်းဖုန်းသည် သင်တစ်ဝက် သို့မဟုတ် တစ်လုံးတည်းသာ ကုမ္ပဏီနှင့် ချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်သည်..။
တရုတ်နှစ်သစ်ကူး အားလပ်ရက် နှင့် စခရင်အကာအကွယ် မှာယူမှု အစီအစဉ်
နွေဦးပွဲတော်လို့လည်း ခေါ်တဲ့ အချိန်နဲ့အမျှ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးလည်း နီးလာပါပြီ။ ခုနစ်ရက်ကြာ အားလပ်ရက်ဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံတွင် အခမ်းနားဆုံး အခမ်းအနားဖြစ်သည်။ အရောင်အသွေးအရှိဆုံးနှစ်ပတ်လည်ပွဲဖြစ်သောကြောင့် တရုတ်ရိုးရာနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်သည် နှစ်ပတ်ကြာပြီး အထွတ်အထိပ်ရောက်သည်နှင့် တရုတ်နှစ်သစ်ကူးကာလတွင်...
2020 OTAO နှစ်ပတ်လည်ပါတီကို ဇန်နဝါရီ 20 ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။
ယခုနှစ်အစတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်အသစ်ဖြစ်ပွားမှုနှင့်အတူ နိုင်ငံအားလုံးသည် နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုကို ဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေသည့် လူဝင်ရောက်မှုကို တင်းကြပ်စွာ ထိန်းချုပ်ထားသည်။ အော့ဖ်လိုင်းပြပွဲများကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဖျက်သိမ်းလိုက်ခြင်းဖြင့် အော့ဖ်လိုင်းလက်လီရောင်းချသည့် သုံးစွဲသူများ၏ အရောင်းပမာဏသည် ...
3D နှင့်တူသော ဆီလီကွန်
3/F၊ Bldg B၊ Zhashi စက်မှုပန်းခြံ၊ #16 Lixin လမ်း၊ Danzhutou Nanwan၊ Longgang ခရိုင်၊ Shenzhen City၊ China
© မူပိုင်ခွင့် - 2010-2021 : All Rights Reserved. အထူးအသားပေး ထုတ်ကုန်များ, ဆိုက်မြေပုံ, Galaxy S10 မျက်နှာပြင် အကာအကွယ်, Samsung S10 မျက်နှာပြင် အကာအကွယ်, S9 Screen Protector, S20 မျက်နှာပြင် အကာအကွယ်, Samsung S20 မျက်နှာပြင် အကာအကွယ်, S10 မျက်နှာပြင် အကာအကွယ်, ထုတ်ကုန်အားလုံး